बम विस्पोटका विषयमा छलफल भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयमै कुटपिट, के हुँदैछ देशमा ? — Motivatenews.Com
बम विस्पोटका विषयमा छलफल भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयमै कुटपिट, के हुँदैछ देशमा ?
काठमाडौं – विप्लव नेतृत्वको नपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको पूर्व संध्यामा देशभर बम विस्पोट गराइरहेका बेलामा गृह मन्त्रालयमा पनि अनौठो घटना घटेको छ । राजधानीसहित देशभरि शृंखलाबद्ध बम विस्फोट भइरहेका बेला गृहमन्त्रालयभित्रै कर्मचारी माथि कुटपिट भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्गलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा असहमति राख्दै आइतबार एक समूहले गृह मन्त्रालयभित्रै कर्मचारीमाथि हातपात गरेको बताईएको छ ।
द्वन्द्वका घाइते अपाङ्गलाई भत्ता, उपचार खर्चसहितको सुविधाको माग राख्दै केही समय पहिले उनीहरू अनसनमा बसेका थिए । माग सम्बोधन गर्न बनेको कार्यदलको बैठकमा कर्मचारीमाथि हातपात भएको हो ।